Qiimaha Ganacsi Lacageed | FXCC Blog
Aug 13, 19 • 1367 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Sida cabsida noocyadeeda kala duwan ay saameyn ugu yeelan karto ganacsigaaga
Mawduucyada ganacsiga cilmi nafsiga iyo maskaxdaada lama siiyo kalsooni ku filan marka laga hadlayo mowduuca ganacsiga 'FX'. Suuragal ma ahan in la xisaabiyo saameynta guud ee maskaxdaada ay ku yeelan karto natiijooyinkaaga ganacsi, sababtoo ah waa ...
Aug 13, 19 • 1275 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Difaaca naftaada marwalba marka aad ku ganacsaneyso FX
Waxaa jira isboorti koox gaar ah oo difaaca uu muhiim u yahay weerarka, ama “dembi” sida ilma adeeradeenna Mareykan ay doorbidayaan inay ugu yeeraan. Kubadda cagta waxaa nalooga tegi doonaa madadaalo aad iyo aad ufiican hadii kooxda Barcelona iyo Manchester City ay ciyaaraan ciyaar loo yaqaan '6-5 ...
Aug 12, 19 • 1212 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off Ku saabsan Sida loo shaqaaleeyo istiraatiijiyad waqti-go'an badan marka la ganacsanayo FX
Waxaa jira tiro aan xadidneyn oo habab aad u isticmaali karto si farsamo ahaan aad u falanqeyso suuqyada FX. Waxaad xoogga saari kartaa hal waqti oo cayiman oo waxaad adeegsan kartaa tusayaal farsamo oo fara badan iyo ficil-cabbir qafis, iskuday inaad cabbirto jihada ...
Aug 12, 19 • 1209 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off on aqbalaadda waxa aad xakamayn karto marka aad ka ganacsato FX waxay muhiim u tahay horumarkaaga
Waxaad sameyn kartaa xakameyn iyo is xakameyn markaad ganacsi sameyneyso, labo fikradood oo saameyn weyn ku yeelan doona horumarka aad sameysay ganacsade ahaan. Isticmaalka kontaroolada kala duwan ee ay tahay inaad ka ganacsato waxay ugu dambeyntii go’aamin doontaa guushaada. Waxay noqon laheyd khayaali in ...
Aug 9, 19 • 1233 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off qaar ka mid waxyaabaha daruuri u ah in lagu meeleeyo qorshahaaga ganacsi
Markaad tahay ganacsade novice ah waxa had iyo jeer ku soo xusuusin doona kuna dhiirigelin doona la taliyayaashaada iyo ganacsatada kale si aad u abuurto qorshe ganacsi. Ma jiro qorshe la aqbali karo oo loogu talogalay qorshaha, in kasta oo ay jiraan xeerar guud ahaan loo tixgeliyo ganacsatada badankood ...
Aug 8, 19 • 869 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off qaar ka mid waxyaabaha daruuri u ah in lagu meeleeyo qorshahaaga ganacsi
Diyaar ma u tahay inaad si buuxda uga go'naato ganacsiga si aad u soo aragto guul?
Aug 8, 19 • 909 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Diyaar ma u tahay inaad si buuxda uga go'antahay ganacsiga si aad uhesho guul?
Markii aad sii gabowdaba waa inaad si xikmad leh u heshaa, waxaad sidoo kale bilaabeysaa inaad ogaato in weedho muhiim ah oo aad maqashay markii aad yareyd ayaa lagu dabaqi karo shaqo kasta, hiwaayad ama kalgacal aad ku jirtid. Sirta guusha ...
Ka fogee walaaca nidaamka ganacsiga markasta iyo meelkastoo suurtagal ah
Aug 7, 19 • 916 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Ciribtirka kadeedka hanaanka ganacsiga markasta iyo meelkastoo suurtagal ah
Suuragal maahan in gabi ahaanba laga cirib tiro walwalka iyo walaaca dhammaan dhinacyada noloshaada. Waxaa marwalba nala xasuusiyaa in culeyska qaar ay noo fiican yihiin. Soo xigashada guud ee ku saabsan qaababka wanaagsan ee walwalka ee aan markasta aragno ayaa si joogto ah uga soo cusboonaaday ...
Fikradaha lagu hagaajinayo farsamadaada maaraynta lacagta
Aug 7, 19 • 770 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Fikradaha lagu hagaajinayo farsamadaada maaraynta lacagta
La-taliyayaal ganacsi oo fara badan ayaa jecel inay akhriyaan maaddada saddexda Ms ee ganacsiga; Maskaxda, Habka iyo Maareynta Lacagta. La-taliyayaal khibrad leh ayaa soo bandhigi doona ra'yiyo sida aad u qiimeyn lahayd arrimahan guusha ee halista ah. Qaar ayaa soo jeedin doona seddexda darajo si isku mid ah, ...
Sababta aad uga fiirsaneyso inaad ka tagto falanqaynta qadka
Aug 6, 19 • 815 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • Comments Off Sababta aad uga fiirsaneyso inaad ka baxdid falanqaynta qadka
Waxaa jira waxsii sheegyo badan oo is-fulinaya oo ku lug leh ganacsiga, ifafaaladan ayaa si gaar ah ugu habboon nooc kasta oo falanqayn farsamo ah. Ganacsadayaashu waxay u janjeeraan inay si aad ah uga murugsan falanqaynta ganacsiga farsamada, waxay sidoo kale caado u leeyihiin inay ku biiraan dhibcaha ...